3190 Ny asa fizahan-tany any North Queensland tropikaly dia ho very
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » 3190 Ny asa fizahan-tany any North Queensland tropikaly dia ho very
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mifandraisa amin'ny natiora amin'ny toerana tsy toy ny toeran-kafa rehetra - rakotra haran-dranomasina ary rakotry ny ala mando, ny fiarahabana mafana indrindra no miandry anao.
Ity ny hafatra ao amin'ny tranokalan'ny Tropical North Queensland Tourism Board, mampiroborobo ny Great Barrier Reef malaza sy Cairns any Aostralia.
Mbola misy asa fizahan-tany Tropical North Queensland miisa 3,150 any Aostralia ho very amin'ny alàlan'ny Krismasy amin'ny fampihenan'ny mpiasan'ny fizahan-tany ho antsasaky ny habeny mialoha ny areti-mandringana, hoy ny fikarohana vaovao avy amin'ny Forum momba ny fizahantany sy fitaterana (TTF).
Ny Lehiben'ny Executive Executive Tropical North Queensland (TTNQ), Mark Olsen, dia nilaza fa ny fizahan-tany dia niasa 15,750 mpiasa an-tsitrapo sy tapa-potoana ary, miaraka amin'ny fandaniana fizahan-tany ankolaka, dia nanohana asa 25,500 XNUMX talohan'ny areti-mandringana tany amin'ny faritr'i Cairns.
Tamin'ny volana jolay 2021 dia namoy mpiasa maharitra 3,600 izahay, na dia niaraka tamin'ny fanohanan'ny JobKeeper sy tsena anatiny niverina aza, ”hoy Andriamatoa Olsen.
"Ny faritra dia nanitatra ny heriny nanerana ny faritry ny famatsiana rehetra vonona ho amin'ny ririnina be atao, fa ankehitriny ireo mpiasa vaovao ireo, ao anatin'izany ny 200 mahery avy amin'ny indostrian'ny fizahan-tany, izay efa niofana am-bolana maro dia nasaina hitady asa hafa.
"Tokony ho takatry ny governemanta ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina misy antsika raha iray amin'ny asa dimy no miankina amin'ny fizahan-tany."
Ny filohan'ny TTNQ Ken Chapman dia nilaza fa ilaina ny fanohanana fidiram-bola ho an'ireo mpiasan'ny fizahan-tany izay very fivelomana ankehitriny.
Henoy ny adihevitra avy any North Queensland
"Ireo mpiasa mijanona ambany ary very asa be loatra noho ny fanidiana any amin'ny faritra misy azy ireo dia afaka mahazo hatramin'ny $ 750 isan-kerinandro amin'ny vola fanampiana amin'ny vola miditra amin'ny Covid avy any Centrelink," hoy izy.
“Saingy nijanona ny mpiasan'ny fizahan-tany satria ny fanidiana hidina any amin'ny toeran-kafa any amin'ny firenena dia mahatonga ny asan'ny mpampiasa ho voaroaka tsy ho azon'ny mpanjifa fidiram-bola.
"Loza maha-olombelona ity noho ny politikan'ny governemanta manontolo."
Ny talen'ny varotra Cairns Chamber of Commerce Patricia O'Neill dia nilaza fa misy fatiantoka asa manerana ny indostria rehetra, indrindra fa ny antsinjarany izay nihena 61% ny asa hatramin'ny taon-dasa teo aloha.
Ny talen'ny talen'ny Advance Cairns Paul Sparshott dia nilaza fa ny fahafahan'ny toekarena isam-paritra ho tafarina dia hihena be raha very ny mpiasa mahay eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny.
“Hisy ny fiovana manjo antsika. Rehefa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny tsenan'ny fizahantany dia mihodina amin'ny indostria hafa misy fiatraikany amin'ny toekarena isam-paritra izany, "hoy izy.
Hoy Andriamatoa Olsen Trinite i Queensland Avaratra is ary hijanona, iray amin'ireo faritra misy fiatraikany betsaka indrindra any Aostralia, ary ny fomba fijery ny indostrian'ny fizahantany dia manjombona.
“Raha tsy misy ny mpanjifa, ny orinasa dia tsy manana turnover hitazomana ireo mpiasa tena mahay ao aminy, ny sasany izay efa nahazo fiofanana an-taonany maro tany amin'ny faritra manokana mba ho tonga mpandeha an-tsokosoko, mpanao antsitrika ary mpanao jumpmasters izay manome ny traikefa fizahan-tany sonia ao amin'ny faritra.
“Vao 27 andro monja no nahitsy ny faritra misy antsika nefa tsy nisy ny fanidiana ny tsena anatiny indrindra tao anatin'ny 18 volana lasa.
“Io vanim-potoana tamin'ny volana Mey io no faritra be olona indrindra tany Cairns sy Great Barrier Reef hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana satria izahay no faritra isam-paritra Googled ho an'ireo mpanao fialantsasatra aostralianina.
“Na izany aza, ny fijanonana / fanombohan'ny fiakatry ny atsimo fanidiana ny fanidiana ny toeram-pivoahana dia sarotra ho an'ny orinasa ny mitantana, indrindra fa ny haavon'ny mpiasa.
“Ao anatin'ny herinandro fahenina nitsidihanay ireo mpitsidika maimaimpoana miaraka amina Australiana 15 tapitrisa mahery mihidy.
"Ny ankamaroan'ny orinasa dia mihazakazaka latsaky ny 5% amin'ny vola azony ara-dalàna, ary ny famandrihana mialoha dia miadana miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny ka hatramin'ny 15-25% ny fananana ary mihoatra ny $ 20 tapitrisa ny hetsika nahemotra ho an'ny Jolay sy Aogositra.
"Manana isika sambo mivoaka miaraka amin'ny mpandeha enina fotsiny and ekipa efatra sy ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana dia amin'ny ora voafetra ny varotra, ny sasany kosa lasa any amin'ny hibernation.
"Tsy natoky intsony ny mpanjifa amin'ny famandrihana ny interstate sy lavitra ny trano, miaraka amin'ny 60% ny mpandeha Aostralianina tsy azo inoana ny hiampita ny sisin-taniny araka ny angon-drakitra vaovao avy amin'ny Queensland Tourism Industry Council (QTIC)."
“Amin'ny antsasaky ny dia an-tanindrazantsika avy any amin'ny faritra atsinanana alohan'ny hidin-trano, ny fanidiana ny sisintany dia mbola hisy fiantraikany lehibe amin'ny faritra misy antsika.
“Amin'izao ankatoky ny fialantsasatry ny fialantsasatry ny sekoly izao, ny hetsika fampielezan-kevitry ny varotra TTNQ amin'ny volana septambra sy oktobra dia hiankina betsaka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany mba hanandrana sy hanome ny mpanjifa fahatokisana hamandrihana amin'ny fahafantarana fa hitohy ny fanovana.
"Ny angona avy amin'ny masoivohon'ny fizahan-tany dia mampiseho fa i Cairns no mijanona ho laharana faha dimy indrindra notadiavina sy fahenina be mpitady indrindra tao anatin'ny efa-bolana, saingy latsaky ny 25% ny karoka sy 55% ny famandrihana avy tamin'ny toerana nisy anay taloha Covid."